Ndị na -emepụta traktọ ụgbọ ala China SINOTRUK HOVA | NA -ENWU MMIRI
Ụgbọ ala traktọ na -ebute ọnụ
Site na imepụta ihe eji arụ ọrụ siri ike na nke kwụsiri ike, ike dị elu, ike injin dị mma, arụmọrụ kwụsiri ike, yana etinyere etiti ya na ụlọ ọrụ na -egwupụta ebe a na -egwupụta akụ na mpaghara arụ ọrụ na -adịghị mma, a na -eji ya maka njem ụgbọ mmiri. Ndị ọrụ nabatara ya nke ukwuu. Enweghị ajụjụ ọ bụla, ụgbọ ala traktọ anyị bụ NO. Nhọrọ 1 maka ọrụ gị.
Ngwaahịa anyị bụ isi sitere na gwongworo kpofuru, gwongworo traktọ, gwongworo ihe igwe ihe, gwongworo Van, nnukwu ụgbọ ala, ụgbọ ala na-ebubata ihe n'okporo ụzọ, gwongworo ụgbọ mmiri tanka, nnukwu ihe mkpuchi ụgbọ ala, ụgbọala na-adọkpụ, ihe na-adọkpụ ụgbọ mmiri na ụdị ụgbọ ala ndị ọzọ gbanwere. Anyị nwere ike chepụta, mepụta ma nye ndị ahịa anyị ụgbọ ala ọ bụla.
Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ gwongworo ihe karịrị afọ 10, anyị maara ihe ụgbọ ala bụ, yana ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Anyị nwere ike ịkwado nkọwapụta maka onye ahịa.
A na -ebupụ gwongworo na trailers anyị n'ihe karịrị mba 60 na mpaghara, dịka Philippines, Russia, Africa, South East Asia, North Asia, Middle East, South America na ndị ọzọ.
Ọrụ nkwụsị maka gwongworo na trailers niile si China, anyị nwere otu ọdụ ọrụ na mba ofesi, wee nye ndị ahịa ọrụ oge mbụ.
Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa, nwere ike izute ọrụ ndị ahịa chọrọ.
Akara gwongworo SINOTRUK HOVA
Akụkụ (Lx W xH) (mm) 4720x2495x3000
Na -abịaru nso n'akuku/n'akuku ọpụpụ (°) 27/48
Mfefe (n'ihu/n'azụ) (mm) 1300/620
Ntọala ụkwụ (mm) 2800
Ọsọ kacha (km/h) 39
Ibu arọ (n'arọ) 6400
Nnukwu Ụgbọ ala (n'arọ) 50000
Injin Nlereanya D10.24ET30
Ụdị mmanụ ụgbọala Dizel
Ike ịnyịnya 240HP
Ọkwa nsị Euro 3
Ike mmanụ ụgbọ ala 300L
Nzipu Nlereanya ZFS6-120
Usoro breeki Breeki ọrụ Dual circuit abịakọrọ ikuku breeki
Breeki na -adọba ụgbọala ike mmiri, ikuku abịakọrọ na -arụ ọrụ na wiil azụ
Breeki inyeaka valve iyuzucha valvụ breeki
Sistemụ nlekọta Nlereanya EATON
N'ihu ihu HOWO 7T, tọn 7
N'azụ axle ST16, Tọn 16
Taịa 11R22.5, 6 PC
Igwe eletrik Batrị 2X12V/165Ah
Ihe Ntụgharị 28V-1500kw
Onye mbido 7.5 KW/24V
Ụgbọ ala D12 cab, yana ikuku ikuku
Agba Red, ọcha, odo, wdg.
Wheel nke ise 2 sentimita (50#)
Nke gara aga: Ụgbọ ala FOTON traktọ 420hp
Osote: SINOTRUK HOWO IGBU EGO EGO
Ụgbọ ala Amity na traktọ
Nnukwu gwongworo ụgbọ oloko Semi Tractor
Ọdụ Ụgbọ ala Semi
Traktọ na gwongworo
Ụgbọ okporo ígwè traktọ
Ụgbọala na traktọ
Ụgbọ ala ọkụ Sinotruk Howo
SINOTRUK HOWO IGBU EGO EGO
HDPE Ngwa anya eriri ụyọkọ tube